सरकारले नयाँ उद्योग शुरु गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० लाख अनुदान दिने, लिनको लागि के गर्ने ?
२०७७ वैशाख ३० गते
काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा आवेदन दिनु भनिएकाे छ । आवेदन व्यक्ति वा संस्थाले दिन सक्ने छन् ।
गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले हिजो सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्ने छ ।
‘आवेदन परेका र त्यसबाछ छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ, त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन्, आयोगले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र नयाँ खुल्ने स्टार्टअपलाई आवेदन गरिसक्न पर्ने छ,’ पौडेलले भने ।
प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक चार महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।
नयाँ क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा व्यवसायी आफूले गर्न खोजेको काम, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव लगायतका विषय उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
सल्यान ,११ फागुन । एमसीसी विरुद्ध सल्यानको श्रीनगरमा मसाल जुलुस निकालिएको छ । विभिन्न ३ […]
सल्यानमा अर्चना बाबाको प्रवचन तथा शिव साधना शिविर सम्पन्न
सल्यान, ७ पौष । सल्यानको प्रमुुख व्यापारिक केन्द्र शारदा नगरपालिका १, श्रीनगरमा सञ्चालित अर्चना बाबाको […]
सल्यान लोक साहित्य महोत्सव २०७८ कार्यक्रमको तयारी पुरा, अब केही बेरमा कार्यक्रम शुरु गरिदै
सल्यान लोक साहित्य महोत्सव २०७८ कार्यक्रमको तयारी पुुरा भैसकेको र अब केही बेरमा कार्यक्रम शुरु […]
रेडियो राप्ती एफ.एम. सल्यान १५ औँ वर्षमा प्रवेश
सल्यान २६, मंसिर । शारदा मिडिया संगमद्धारा सञ्चालित रेडियो राप्ती एफ.एम. १०४.८ मेगाहर्ज १४ वर्ष […]